पालामको मोहमा रमाउने निलिमा साम्पाङ राई | Everest Times UK
कोरोना भाइरसका नयाँ सङ्क्रमतिहरु बढेपछि बेइजिङमा नागरिकलाई बिदा मनाउन बाहिर ननिस्किन आग्रह
‘डेथ सर्टिफिकेट’का कारण गायक बद्री केसीको शव नेपाल पठाउन ढिलाइ
डा. चन्द्र लक्सम्बाको निधनले गोर्खा आन्दोलनलाई नै अपुरणीय क्षति : गेसो
नेपालमा सुरु भयो कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान
सिनेमा टुरिजमः सम्बन्ध र सम्भावना
बेलायतका नेपाली समुदायका अग्रज डा. चन्द्र लक्सम्बाको निधन
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी चार मुद्दा दर्ता
एनआरएनएको विशेष महाधिवेशनबाट विधान र आर्थिक प्रतिवेदन पारित
गुरुङ चलचित्र भ्रें को मुनाफाबाट ५ लाख सामुदायिक भवनलाई
चन्द्रमाया गुरुङको स्मृतिमा तमुधिं आमा समूह यूकेबाट नेपालमा २ लाख १८ हज़ार ६८२ सहयोग
तमू समाज केन्ट यूकेको १३ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्‍न
बेलायतमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ९७ हजार नाघ्यो
मिस तामाङ २०२१ को पहिलो अडिसन सकियो, १८ जना सहभागी
बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सन र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनबीच छलफल
तमु आदिकवि स्व.हर्कबहादुर गुरुङको सालिक अनावरण
निर्वाचन आयोगद्वारा नेकपाका दुवै समूहको दाबी अस्वीकार, नेकपा एकै रहेको निष्कर्ष
४९ वर्षीय मुख्यमन्त्री राईले गरे विवाह
‘चिमखोले फेसबुक समूहद्वारा हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सम्पन्‍न
कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न डा योगी विकासानन्दका ‘१० भ्याक्सिन’ सुत्र
साहित्य भावनामा फुल्दछ, फुलाइन्छ र सजाइन्छ : लालसुन्दर राई
‘मुख स्वस्थ्य रहे अधिकांश रोगबाट बचिन्छ’
In: फिचर, व्यक्तित्व
लन्डन । याक्थुङ कल्चरल ग्रुपले आयोजना गरेको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय पालाम गायन प्रतियोगिताको दौडमा गैर लिम्बूहरुको सहभागिताले तहल्का मचायो । आधा दर्जन गैर लिम्बू प्रतियोगीहरु फक्तालुङ चरणमा प्रवेश गरेर विभिन्न विधामा उत्कृष्ट ठहरिए । पालाम प्रतियोगिताको सवोत्कृष्ट पालाम (शब्द) निलिमा साम्पाङ राईको पोल्टामा गयो ।
लिम्बूहरुको उद्गम स्थल चौबिस बुढी मोरङमा जन्मिन्, निलिमा । आमा तुम्बापोमा र घरभित्रकै बोजू लेक्वामा भएपछि साम्पाङ कुलपूजाबाहेक याक्थुङ पान, खानपान, सांस्कृतिक कर्मकाण्ड, कला संस्कृति सबै मानव जीवन यापनका दैनिकीहरु याक्थुङमय वातावरणमा बित्यो । निलिमाको धान नाच्ने बैंस फक्रेको समय लिम्बुवानमा यालाङले भर्खर ब्रेक लिंदै थियो र नै आम लिम्बू युवायुवतीहरुझै उनले तन्देरीको हात समातेर धान नाच्ने अवसर गुमाइन् ।
पालामको मोहमा रमाउने निलिमा आमाको गर्भमा अंकुरित लिम्बू कला संस्कृतिको भ्रुणले आखिर पछिल्लो समय पालाममा फक्ताङलुङझैं चम्किन्न सफल भइन् । निलिमा विगत १४ वर्षदेखि इजरायलमा छिन् । उनलाई गित संगित क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै विभिन्न कठिनाइहरुले गर्दा निरन्तरता दिन सकिनन् । विदेशमा रहेर उनले नेपाली लोकगीत र लिम्बू विधामा थुप्रै सिर्जनाहरु पस्किसकेकी छिन् ।
इजरायलमा सयौं लिम्बूलिम्बूनीहरु भए पनि उनीबाहेक कसैले अन्तर्राष्ट्रिय पालाम गायन प्रतियोगितामा भाग लिन आँट गरेनन् । ३५२ प्रतियोगीहरुको भीडमा उनले धेरै दिग्गजहरुलाई पछि पार्दै ५० नंवर फक्ताङलुङ चरणमा प्रवेस गरेको गरिन् । अन्ततः उनको पालाम सवोत्कृष्ट ठहरियो । निलिमा हाल जारी प्रथम याक्थुङ हाक्पारे गायन प्रतियोगितासमेत भाग लिएकी छिन् र ख्याली प्रतियोगिताको तयारी छिन् । निलिमा प्रतियोगितामा देखापर्नु अघि नै लिम्बू कला संस्कृतिमा नाम लेखाइसकेकी स्रस्टा पनि हुन् । गत वर्ष किरात याक्थुङ इजरायलमा सम्पन्न चासोक तङनाममा उनको पालाम, हाक्पारे साम्लो र ख्यालीजस्ता लिम्बूका थुप्रै विधा समावेस ‘आसेप्माङ’ एल्बम सार्वजानिक गरेर चर्चाको शिखरमा पुगेकी थिइन् ।
आसेप्माङ एल्बमको पालाम संकलन सुवर्ण नेम्वाङ, यादन शेर्मा, आन्छुमे नोसान र भाका राजु आङदेम्बे र यादन शर्माको छ । १८ वर्ष पहिले साथीहरुसंग मिलेर बनाएको पूर्वेली लोक भाकाको ‘सोल्टेनी हजुर’ एल्वममा उनको दुईवटा गीत छन् । माध्यमिक तह अध्ययनकै क्रममा नेपाली गित संगितको दुनियामा सशक्त उपस्थिति देखाइसकेकी निलिमा आफ्नो अध्ययन र घर व्यवहारले लामो समय सांगीतिक यात्रामा अर्ध विराम लाग्यो । सानैदेखिको कला संस्कृतिको मोह र केही गर्छु भन्ने हुटहुटीले उनलाई गीत संगीतमा सुखद पुनरानगमन गरायो । अनुपम म्युजिक ग्रुपकी महासचिसमेत रहेकी निलिमाले सोही ग्रुपको प्रथम भर्चुअल वार्षिकोत्सवको अवसरमा निलिमा र जितेन राईसंगको ‘हुरुमा हुरु सिरेटो चल्छ’ विमोचन गरिन् ।
पूर्वेली लोक भाकामा ख्याती आर्जन गरी सकेका पुराना वरिष्ठ गायक, संगीतकार तथा गीतकार जितेन राईको संगीत र शब्द संकलन रहेको यो गीतमा गाउनु पाउँदा आफू गौरन्वित भएको रहेछ उनलाई । ११ मंसिर २०७६ मण्डला थिएटरमा विमोचन भएको ‘निलिमा’ उनको अर्को सफल एकल एल्बम हो । यो एल्वममा गीतकार सागर रावत, माया मगर र चन्द्र रानहंछाको शब्द रचना र भिषण मुकारुङ, राज रोवर्ट अजनबी, उत्तमजङ लावती र यादन शेर्माको समधुर संगीत रहेको छ ।
साम्पाङ राई समुदायमा जन्मेरपनि पालाम प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसर मिलेकोमा आफू दंग परकी छिन्, निलिमा । लिम्बुवान माटो, यहाँको कला संस्कृतिमा अभ्यस्त निलिमा त्यही क्षेत्रमा केही सेवा गर्न पाएकोमा याक्थुङ कल्चर ग्रुपप्रति उनले ठूलो सम्मान व्यक्ति गरेकी छिन् । हराउन लागेको याक्थुङ कला संस्कृतिमा निलिमाको आगमनले लिम्बू समुदायलाई ठूलो उर्जा प्रदान गरेको छ ।
A memory of the first day in quarantine
पुस्तकबाट ‘ताङ्तिङ’ चिनाउँदै प्रधानाध्यापक गुरुङ
सहारा यूकेका उपाध्यक्ष ले.रि. कुसाङ आदर्श तमु २०२० अवार्डबाट सम्मानित
बेलायतमा छाउँदै हिमालयन योगा [हेरौं २५ तस्बिरहरु]